ED CHALLENGER : I'M BEING THREATENED WITH DEATH newsdzeZimbabweNewsdzeZimbabwe
ED CHALLENGER : I'M BEING THREATENED WITH DEATH
Sunday, April 10, 2022 NewsdzeZimbabwe 0
A Zanu PF youth member, who is challenging President Emmerson Mnangagwa’s ascendancy after the 2017 military coup, says he is receiving death threats amid a spirited campaign to cause the collapse of the intriguing High Court case.
Sybeth Musengezi caused a furore last year when he approached the High Court challenging the way Mnangagwa was allowed by Zanu PF to succeed the late Robert Mugabe as leader of the ruling party after the coup.
Nguni cited Musengezi, Zanu PF, Mnangagwa, Zanu PF secretary for administration Obert Mpofu, Zanu PF secretary for finance Patrick Chinamasa, former vice-president Phelekezela Mphoko and former party secretary for finance Ignatius Chombo as first to seventh respondents respectively.
In opposing papers, the Zanu PF secretary for administration Obert Mpofu said the High Court had no jurisdiction to hear the case, adding that Mnangagwa enjoyed presidential immunity.
Musengezi cited Zanu PF, Mnangagwa, Mpofu, Chinamsa, Mphoko and Chombo as the first to fifth respondents respectively in his application.
Zanu PF is also claiming that the politician is being sponsored by exiled former minister Saviour Kasukuwere who has declared an interest to challenge Mnangagwa in next year’s elections. Standard